Holafitry ny mpanao gazety : Manameloka ny fanendrena an’i Rina Andriamandavy -
AccueilSongandinaHolafitry ny mpanao gazety : Manameloka ny fanendrena an’i Rina Andriamandavy
Fanaovana tsinontsinona ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara ny fanendrena an’i Rina Andriamandavy minisitra vaovao hisahana ny minisiteran’ny Serasera. Sady tsy mpanao gazety izy no tsy mahalala na kely akory aza ny momba izany asa masina izany. Tsy eken’ny mpanao gazety eto Madagasikara izany, ary nisy ny fanambarana ofisialy navoakan’ny holafitry ny mpanao gazety. “ Ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara sy ny mpanao gazety rehetra dia manameloka io fanendrena tefy maika vokatry ny zara-manta io, ary mitaky fandraisana andraikitra amin’izay manam-pahefana tandrify izany. Tsy ianareo indray no handrava ny firaisankinanay ho an’ny tombontsoam-pirenena iombonana ”, hoy ny fanambarana ofisialy avy amin’ny Ojm.
Nampiseho fahendrena hatrany ny mpanao gazety tamin’ny famahana ny olana politika teto Madagasikara ka tsy mba isan’ireo nametraka fepetra ho an’izay olona mety hapetraka eo amin’ny toeran’ny minisitera hiahy ahy. Tsy midika anefa izany fa izao karazan’olona rehetra tsy mahay akory ny asan-gazety sy tsy mahalala ny aty vilanin’ny fanaovan-gazety no hanankinana ny fiahiana izany asa masina izany. “Tsy mba anisan’ireo nanery ankolaka na mivantana izay tokony ho minisitra miahy ny serasera na inona na inona fivoaran’ny toe-draharaha teto amin’ny firenena hatramin’izay ka hatramin’izao”, hoy hatrany ny fanamarihana avy amin’ny holafitry ny mpanao gazety.
Miantoka ny filaminana sy fahaleman’ny firenena ny mpanao gazety, ary tena manan-danja ny andraikitra ijoroany isan’andro isan’andro amin’ny fanomezam-baovao ny olom-pirenena. “ Manana andraikitra lehibe hampisy fitoniana mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana ny mpanao gazety kanefa dia izy no natao faralahiny ka nampivesarana hazo tsy fantatra. Mahatsiaro ho natao tsinontsinona ny mpanao gazety tamin’ny fanendrena ny minisitra miahy azy amin’izao governemanta iraisanaizaon ary tsy mba nakan-kevitra akory. Tsapa fa nomen’ny mpanendry vahana kokoa ny famahana ny olan’ny samy mpanao politika fa nodinganiny ny lafin’ny teknika tamin’ny fanendrena minisitra”, araka ny voalazan’ny votoatin’ilay fanambaran’ny OJM.
Tsy eken’ny fianakaviamben’ny mpanao gazety ny fanendrena an’ i Rina Andriamandavy, ary ho fanoherana izany dia ho tonga marobe eny amin’ny minisiteran’ny Serasera anio amin’ny 11 ora ny mpanao gazety rehetra ho fanehoana ny tsy fankasitrahana io fanendrena io.